Al Qaacidda Oo Weerar Qorsheysan Ku Qaaday Saldhigyada Ciidamada UN-ka Ee Wadanka Maali.
Sunday April 15, 2018 - 11:07:03 in Wararka by Super Admin
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay weerar aad u xooggan oo rag hubeysan ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda Faransiiska ee wadanka Maali.
Wararka ka imaanaya waqooyiga Maali ayaa sheegaya in xoogag jihaadi ah ay weerar qorsheysan ku qaadeen saldhigga ciidamada Q.Midoobe ay ku leeyihiin magaalada Timbuktoo.
Weerarka oo ku billaawday laba gaari oo Walxaha qarxa lagasoo buuxiyay waxaa xigay tobaneeyo madfac oo roobka looga dhigay saldhigga ciidamada UN-ka sida ay sheegeen saraakiil katirsan xukuumadda Maali.
War kasoo baxay taliska ciidamada Jinsiyadaha kala duwan leh ee ku howlgala magaca Q.Midoobe ayaa lagu sheegay in hal askari uu ka dhintay halka 10 askari oo Faraniis ah dhaawacyo soo gaareen.
Warbaahinta Maxalliga ah ee wadanka Maali waxay sheegtay in xoogaga weerarka qaaday ay adeegsadeen xeelado dhagar ah sida iyagoo soo xirtay dareeska ay caanka ku yihiin ciidamada Q.Midoobe ee loo yaqaan MINUSMA.
"Weerarada oo ahaa kuwa qorshaysan ayay dagaalyahannadii fuliyay waxay soo xirteen dareesmka ciidamada MINUSMA iyo koofiyadaha buluugga ah oo ay kusoo xireen xireen Walxaha qarxa waxaa ka dhashay burbur" sidaas waxaa yiri qof ku sugan magaalada Timbuktoo.
Xoogaga jamaacada Ugargaaridda islaamka iyo muslimiinta ee taabacsan Ururka Al Qaaciddada Maqribul islaam ayaa looga shakisanyahay in ay mas'uul ka yihiin weerarkan khasaaraha badan dhaliyay.
Wariyaasha ayaa weerarkii shalay ku tilmaamay midkii ugu xooganaa ee Abid lala beegsado ciidamada shisheeye ee duullaanka ku qaaday Maali tan iyo sanaddii 2013.
Weerar 5 Askari Jabuutiyaan ah lagu dilay oo ka dhacay Gobolka Hiiraan.
Faah Faahin: Al Shabaab Oo Sheegtay in 3 Askari Caddaan ah ay ku dishay Weerarkii Madaafiicda Garoonka Ballidoogle.
Al Shabaab Oo Howlgal isbaaro qaadis ah fulisay iyo Weerar Madaafiic ah oo ka dhacay duleedka Kismaayo.
Weerar Askari Lagu Dilay Oo ka Dhacay Bartamaha Wadanka Maali.